Zimbaboe: Voabahana ny bilaogiko! · Global Voices teny Malagasy
Zimbaboe: Voabahana ny bilaogiko!
Voadika ny 11 Janoary 2019 2:35 GMT
(Fanamarihana:a lahatsoratra anglisy nivoaka tamain'ny Aprily 2009)
Ny Zoma 20 Martsa 2009, voabahana ilay bilaogy zimbaboeiàna Peace, love & happiness unto the whole world, (Fandriampahalemana, fitiavana ary hasambarana ho an'ny tany manontolo). Nanoratra mikasika izany ny mpanoratra ilay bilaogy, Eusebia, manao hoe, “Tena tsy azoko mihitsy ny antony nanakanana ny bilaogiko… Laviko ny hosivanin'ny olona na ampanginina, na avy amin'iza izany na avy amin'iza, satria fantatro ny zo maha-olona ahy ho afaka maneho hevitra an-kalalahana…”
Taorian'ny nifandraisanay taminy mba haka vaovao misimisy kokoa, azonay fa efa ho roa herinandro ilay lazainy hoe “olona” no niezaka ny hibahana ny bilaoginy.
Misy olona mibahana ny bilaogiko, hoy ny lohateny lehibe amin'ilay lahatsorany momba izany:
Misy olona mibahana ny bilaogiko ary mandefa ity lahatsoratra ity aho mba hanehoako fotsiny amin'io olona io fa vitako ny miala amin'ilay fibahanana ary mbola vitako ny miditra amin'ny bilaogiko sy, raha ny marina, mandefa lahatsoratra ao na rahoviana na rahoviana itiavako manao izany.
Tena tsy azoko mihitsy ny antony nanakanana ny bilaogiko ary na inona na inona antony, vao mainka mandrisika ahy aza izany handefa ao lahatsoratra maromaro kokoa maha-be resaka na mihantsy. Laviko ny hosivanin'ny olona na ampanginina, na avy amin'iza izany na avy amin'iza, satria fantatro ny zo maha-olona ahy ho afaka maneho hevitra an-kalalahana ary vonona ny hampiasa izany feno sy tanteraka aho.
Nanome toky izy fa hiverina hiaraka aminà lahatsoratra maha-be resaka maromaro kokoa:
HIVERINA AO AMIN'NY BILAOGIKO MIARAKA AMINA LAHATSORATRA IRAY MAHA-BE RESAKA VANTANY VAO VITAKO NY FANORATANA NY ASA NANKININA AMIKO.
Tamin'ny 2007, natsangan'ny governemanta zimbaboeiàna ny lisitra mainty iray ahitàna tranonkala 41, tafiditra tao anatiny ny Global Voices. Tamin'izay taona izay ihany, navadika ho lalàna ilay volavolan-dalàna Fipaingorana ny Fifandraisana. Omen'io lalàna io ho an'ny governemanta ny fahefana sy zo mba hanara-maso ny fifandraisana postaly, telefaona ary aterineto ao Zimbaboe.
** Ireo bilaogera miaina sivana na olana mifandraika amin'izany dia afaka miantehitra amin'ny Global Voices Advox, tetikasa iray an'ny Global Voices, izay mikatsaka ny hanorina tambajotranà bilaogera sy mpikatroka manerantany manohitra ny sivana, any amin'ny tontolo andalam-pandrosoana, tetikasa najoro hiarovana ny fahalalahana maneho hevitra an-kalalahana sy ny fahafahana maka torohay ety anaty tambajotra.